August 11, 2019 Online Bunner 0
စင်ကာပူအမျိုးသမီး ၀ါနီရဲ့သတ္တိကတော့ တော်တော်လေးကို ချီးကျူးဖို့ကောင်းတဲ့ မိခင်လို့ ဆိုရမှာအမှန်ပါ ဆေးရုံမှာ မွေးဖို့ကိုကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ စင်ကာပူအမျိုးသားနေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် နည်းနည်းစောပြီး၊ ခွဲမွေးဖို့ကို ဆေးရုံမှာ သွားပြီးပြောချိန်မှာ ဆရာဝန်က လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ၀ါနီတို့လင်မယားလည်း အိမ်ကို (၂)နာရီလောက်မှာ ပြန်ရောက်လာကြပြီး၊ ပြင်ဆင်စရာရှိတာကို ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ် စာရွက်စာတမ်းတွေ […]
ရေဘေးသွားရောက်လှူဒါန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ပါက အားမနာတမ်း ကားမျိုးစုံ အကူအညီတောင်းရန် ရေဘေးသွားရောက်လှူဒါန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ပါက အားမနာတမ်း အကူအညီတောင်းလို့ရတဲ့ ရွှေကဆုန်ယန္တရား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ ရေဘေးသွားရောက်လှူဒါန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ချက်ရှိပါက ဆက်သွယ်နိူင်ပါတယ်။ အားမနာတမ်း အကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်များ ရွှေကဆုန်ယန္တရား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှ ရေဘေးသင့်ဒေသများကို ဆန်နှင့်စားသောက်ကုန်များ သွားရောက်လှူတန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ချက်ရှိပါက (6ဘီး, […]
အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ လိင်ခံစားမှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ကြသလဲ (ဗဟုသုတ အဖြစ်တင်ပေးခြင်းသက်သက်ပါ
အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ လိင်ခံစားမှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ကြသလဲ…? လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စံနှုန်းတွေက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိင်ဆက်ဆံချိန် အထွတ်အထိပ်ရောက်တာကို ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ် အများကြီးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ် လေ့လာချက်တွေအရတော့ အမျိုးသမီးတွေက လိင်ဆက်ဆံချိန် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်အချိန် ခံစားမှုအထွတ်အထိပ် ရောက်ကြလဲဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူပါဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ် အမျိုးသမီးတွေ လိင်ခံစားမှု […]
လူဦးရေး ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားလိုက်ရတဲ့ Lekima တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း
ekima တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကို ဒီကနေ့မှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ မုန်တိုင်းကြောင်း ၁၃ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၆ ယောက် ပျောက်ဆုံးနေပါတယ် ဒါ့အပြင် လူဦးရေး ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာကို ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားလိုက်တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာက ပြောပါတယ်။ Lekima မုန်တိုင်းကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်ပြီး ၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ် […]
မွန်​ပြည်​နယ်​ ​မော်​လမြိုင်​မြို့နဲ့ ​ရေး မြို့တို့အတွက် 23.6.2019 နေ့ ညနေတွင်ကြိုပြခဲ့တဲ့ နိမိတ်
မွန်​ပြည်​နယ်​ ​မော်​လမြိုင်​မြို့နဲ့ ​ရေး မြို့တို့အတွက် 23.6.2019 နေ့ ညနေတွင် ကြိုပြခဲ့တဲ့ နိမိတ် အထူးသတိ​ပေးချက်​ မွန်​ပြည်​နယ်​ ​မော်​လမြိုင်​မြို့နဲ့ ​ရေး မြို့ တို့ရဲ့ အ​နောက်​ဖက်​ ​ကောင်းကင်​ပြင်​မှာ ယ​နေ့(23.6.2019)ရက်​​နေ့ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်​ နဲ့ ည […]
အသည်းကွဲပြီး ဘဝကိုအရူံးပေးချင်သူတွေ စာဆုံးအောင်ဖတ်ပါ
အသည်းကွဲပြီး ဘဝကိုအရူံးပေးချင်သူတွေ စာဆုံးအောင်ဖတ်ပါ သူ့ကြောင့် သေချင်လောက်တဲ့အထိ ခံစားဖူးသလား? ငါသေသွားရင် သူတော့ နောင်တတွေနဲ့ ဆက်အသက်ရှင်နေမှာပဲလို့ရော တွေးဖူးသလား? အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ် …အသဲကွဲတာ ကိုယ့်အပြစ် မဟုတ်ပေမယ့် ဒီအလွမ်းတွေ နာကျင်ခြင်းတွေထဲကနေ အချိန်တစ်ခုကြာလာသည်အထိ ရုန်းမထွက်နိုင် လွတ်မချနိုင်သေးတာကတော့ ကိုယ့်အပြစ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ခံစားပါ … ဒါပေမယ့် […]
ခြေသလုံးကြီးသူတွေ အတွက် အထိရောက်ဆုံး ခြေသလုံးသွယ်လျစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၆) မျိုး
ခြေသလုံးကြီးသူတွေ အတွက် အထိရောက်ဆုံး ခြေသလုံးသွယ်လျစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၆) မျိုး … တစ်ကိုယ်လုံးလှနေပါပြီဆိုမှ ခြေသလုံးတွေမှ တုတ်နေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေတဲ့ သူလေးတွေ ရှိနေလား။ ခြေသလုံးကိတ်နေတာလေးကို သွယ်လျသွားစေမယ့် အလွယ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို အခုပဲကြည့်ပြီး ဒီနေ့ကစလို့ နေ့တိုင်းလုပ်လိုက်တော့နော်။ (၁) ခြေဖျားထောက်မယ် … လက်နှစ်ဖက်က […]